Iindaba - Yeyiphi indima yokudlala kwimowudi eqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla?
Yeyiphi indima yokudlala kwimodi eqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla?
Namhlanje siza kukubonisa indima yemodi yokunyanzeliswa kwendandatho yemagnethi.
Iringi yamagnetic imowudi yokunyanzeliswa eqhelekileyo isetyenziselwa la manqaku mathathu alandelayo:
1. Isangqa semagnetic imo eqhelekileyo inductors zisetyenziswa kakhulu kwizikhenkcisi, koomatshini bokuhlamba iimpahla, kwiikhamera, kwizibane zefluorescent ezincinane, izixhobo zokurekhoda, iitv, imibala yeTV, njl. I-flow loop iqhuba ingxolo. Ngayo, akukho mfuneko yokuba sikhathazeke ngokuthintela uphawu kunye nokuphazamiseka xa usebenzisa ezi mveliso zombane.
2. Isetyenziswa kwi-AC tuner, ifeksi, kunikezelo lwamandla, njlnjl. Njengenqaku lokuqala, i-inductor-mode inductor isebenza ikakhulu ekucinezeleni ezinye zezinto ezingcolileyo ezikwindlela eqhelekileyo yokutswina, kunye nokuhambisa ngokuchanekileyo isiginali kumqondiso Indawo yokukhwelela.
3. Amanye amaqabane amancinci aneemfuno eziphezulu kakhulu zokungeniswa kwe-inductor. Ngeli xesha, kucetyiswa ukuba usebenzise iringi yamagnetic imowudi eqhelekileyo ye-inductor. Ukuphakama kokuqina kwemagnethi, kokukhona iqondo lobushushu elisezantsi elinokumelana ne-inductor. Kwangelo xesha, sinokuthi sinciphise inani lokujija i-inductor coil kwaye sisebenzise ubukhulu becala locingo lobhedu. Khetha undoqo ekunene ngokweemfuno zakho.
Kwangelo xesha, njengemagnethi yentsimbi eyenziweyo yokunyanzeliswa, ubuhlalu kunye nomsesane wemagnethi zincinci. Xa uphantsi koxinzelelo loomatshini bangaphandle (ifuthe, ukungqubana), umzimba womazibuthe uthambekele ekuqhekekeni, kungoko kufuneka sinikele ingqalelo kwibhondi yamagnetic kwi-PCB xa uyisebenzisa. Xa ubeko lwebhodi lufakiwe, akufuneki lube ngaphakathi kwe-3cm yesinxibelelanisi esisemgceni.
Kwiimfuno ezahlukeneyo, sebenzisa inductors ezisemgangathweni ezahlukeneyo. Le yinto ebesoloko siyikhuthaza kwaye siyikhuthaza kuwo wonke umntu. Ewe, iringi yanamhlanje yemagneti yendlela eqhelekileyo yaziswa kuye wonke umntu. Ukuba ufuna ukwazi ulwazi oluthe kratya lokufunda, funda ulwazi ngakumbi, wamkelekile ukusishiya umyalezo wokudibana!
Ixesha Post: Jun-01-2021